Semalt Erklärt Die Wichtigsten Aspekte der Nutzung von Website Crawler
Website-Crawler dia ireo kodin'ny Bots amin'ny endritsoratra izay manasongadina ny tranonkalan'ny tranonkala rehetra ary mamantatra ny endrik'ilay soritsoritra. Amin'ny ankapobeny dia misy ny fanovana ao amin'ny tranokalantsika ao anaty tranonkala mba tsy hahitana ireny mpikaroka ireny. Ny fampahafantarana rehetra mety tsy ho hitan'ny Webcrawler dia tsy azo zaraina amin'ny Google amin'ny ankapobeny - litespeed 3.5. Tsy voatery hifanaraka amin'ny laharam-pirahalahiana ianao, na dia mandao ny SEO aza ianao. Ny tsy fahalalany dia adihevitra amin'ny Webdesign, izay ataon'ireo olona raha tadiavina ny hanoratana ny tranonkalany. Noho izany antony izany, dia ilaina ny manamboatra mpitaingina amin'ny tranonkalanao mba hametrahana fototra amam-panamafisana ary hamaha ny olana izay mety hampihenana ny laharam-pahamehana.
Der Expert von Semalt Digital Services, Jack Miller, dia maneho ireo hevi-dehibe momba ny fampiasana ny mpiloka amin'ny tranonkala.
Ny mpanafika dia afaka maneho anao izay hitany. Raha maro ireo mpandraharaha no mamorona ka mamorona ny tranonkala ary mamorona tanjona, mieritreritra fa ny safidin'ny mpiaro azy dia tsy azo antoka, ary mamela ireo hafa izay tsy azo atao. Maty ny maty rehefa tafiditra ao anaty tranokala Webcrawler. Ny Webcrawler dia mahazo ny sekretera lehibe indrindra ao amin'ny tranokalanao. Azonao atao ny mijery ny famandrihan-kevitra momba ny vokatra an-tserasera sy ny tranga maro ao amin'ny Content Management System
Ny sehatra manan-danja indrindra amin'ny SEO dia ny fanaraha-maso ny fizotry ny fizarana tsirairay. Ny mpilatsaka an-tserasera dia afaka manadihady sy manitsy ireo loharanom-baovao avy amin'ny Google Analytics sy ny Google Search Console. Afaka manampy anao koa ny manatsara ny fahombiazan'ny pejy maro sy manome anao valiny mahafa-po mba hamolavolana ny mombamomba anao ho an'ny SEO tsara indrindra..
2. Hametraka hevitra ara-teknika
Anisan'ny mahatonga ny faharesen-dahatry ny SEO ho an'ny fahasalamana dia olana mahakasika ny fahana sy ny fihetsik'ilay tranonkala. Raha toa ka manaisotra ilay mpilalao tsotra ianao dia hamerina ny valin'ny adiresy ho an'ny URL rehetra ao amin'ny tranonkalanao. Ny fahadisoana sy ny fahalefahana dia afaka mifehy haingana amin'ny sasany ny sivana toy ny diso 404-filtre. Azonao atao koa ny mampahafantatra anao ny alàlan'ny Redirect-Links sy ny toerana maro samihafa.
3. Crawlern kann nicht verlinken Inhalt
Ny "Crawler" dia tsy afaka "Index" - Befehle erkennen. Ireo no sehatra ao amin'ny tranonkalanao, izay tsy afaka mampiasa ny bots. Amin'ny alalan'io vaovao io dia ahafahanao manova ny fepetra ilaina ao amin'ny Content-Management-Structure ary apetaho ny fanontanianao rehetra. Ny vokatra kaontinanta sy ny kaonty amin'ny kaonty dia afaka mahazo Updates ho an'ny Database.
4. Ny doppelten Content erkennen und reparieren
Amin'ny hafa dia afaka mahita ny safidy doppelten Content. Ireo daty ireo dia ny votoaty, izay hita amin'ny rohy maromaro ao amin'ny Suchmaschinen. Ireo tranonkala ireo dia ratsy ho an'ny SEO ary tsy mitsahatra ny manatsara ny fahefan'ny tranonkalanareo. Ny mpilatsaka an-tsitrapo dia afaka manampy anao hamantatra ireny pejy ireny ary hanampy anao amin'ny fampivoarana ny 301-Weiterleitungen.
Website-Crawler afaka mahita ireo zavatra miafina ao amin'ny tranonkalanao ahafantarana izay mety hitranga indraindray eo amin'ny tranonkala. SEO dia sora-baventy feno, izay mitaky ny fahombiazan'ny fitazonana sy ny fitazonana ny fampahalalam-baovao an-tserasera, fa koa ny fanavaozam-baovao hatrany ny vaovao. Ny sasany amin'ireo mpikirakira ny tranonkala toy ny SEO Spider von Crying Frog na Semalt Analyzer mitazona toy ny karazam-borona toy ny karazana. Azonao atao ny mametraka ny mombamomba anao tsara izay mety hanampy anao mba hanatsarana ny fanovana ao amin'ny tranonkalan'ny tranonkalanao, mba hahazoana ny laharana ambony amin'ny natural organic searchanfragen.